May 2020 - Shop
Shop > All Articles > 2020 > May
Blender တွေအကြောင်းသင်ဘယ်လောက်သိလဲဆိုတာ ဒီမေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေပြီး စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်0289
The KaungHtet May 29, 2020 11:40 am May 29, 2020
အားလပ်ရက်တွေမှာ အိမ်မှာနေရင်း ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်သင့်သလဲ?0306
The KaungHtet May 28, 2020 12:03 pm June 2, 2020
အားလပ်ရက်များအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဟာပျော်စရာကောင်းပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာလဲကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းအချိန်ကုန်ပါတယ်။ များသေအားဖြင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုရင် စျေးဝယ်တာတွေ၊ အနားယူတာတွေ၊ ထမင်းဟင်းချက်တာတွေနဲ့ကုန်ဆုံးသွားတတ်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ဖို့အတွက် အားလပ်တဲ့အချိန်လေးတစ်ချိန်လောက်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ကဲအဲ့တာဆိုရင် လေ့ကျင့်ခန်းစလုပ်တော့မယ်လို့ပြောနေမယ့်အစား ခုပဲမြန်မြန်စတင်လိုက်ပါ… “Milk Jug” Squats ဒါလေးကတော့ တစ်ဂါလံနွားနို့ဘူး ဒါမှမဟုတ်အအေးဘူးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်စုကိုင်၍ ကုလားထိုင်အနေအထားထိုင်ထပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ …
6 Ways To Improve Your Online Apparel Business to Make More Sales!0266
The KaungHtet May 28, 2020 9:54 am June 1, 2020
Selling clothes online has beenagreat way to make profits and reach more customers lately! Especially in the current …
🖥Gaming ကွန်ပျူတာ တွေအကြောင်းသင်ဘယ်လောက်သိလဲဆိုတာဒီမေးခွန်းလေးတွေဖြေပြီးစမ်းသပ်ကြည့်ရအောင် ?🖥0352
The KaungHtet May 27, 2020 10:03 am May 27, 2020
📱ဖုန်းတစ်လုံးကို ရေရှည်ခံအောင် ဘယ်လိုသုံးရမလဲ?📱01016
The KaungHtet May 26, 2020 8:22 am May 26, 2020
ဖုန်းတစ်လုံးကို ကြာရှည်ခံအောင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် စည်းကမ်းရှိရှိအသုံးပြုတတ်ရုံနဲ့မရပါဖူး။ ဖုန်းအကြောင်းကို သေချာသိရှိနားလည်ပြီး သုံးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးဖုန်းတစ်လုံးစသုံးတော့မယ်ဆိုရင် Android ပဲ သုံးသုံး Ios ပဲသုံးသုံး အနည်းဆုံး တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ် Restart ချပေးပါ။ ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ performance ကိုတက်ဖို့အတွက် …
❄Air con ကို မီတာခ အရမ်းမကုန်အောင်ဘယ်လိုအသုံးပြုကြမလဲ?❄04623
The KaungHtet May 25, 2020 9:44 am May 25, 2020
ပုံမှန်အားဖြင့် လူတွေဟာ အဲကွန်းအေးတာမအေးတာကို ရီမုနဲ့ လိုသလို ချိန်ဆပြီး အေးအောင်လုပ်နိုင်ကြတယ်လို့ထင်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့မဟုတ်ပါဖူး။ အဲကွန်းမှထွက်လာတဲ့ အအေးဓာတ်ဟာတစ်သမက်ထဲပါပဲ။ အဲကွန်းရဲ့ Indoor Unit ဟာ အခန်းတွင်းကလေပူတွေကို စုပ်ယူလိုက်ပါတယ်။ အပြင်မှာ ၃၁ ဒီဂရီ ရှိနေချိန် …
အိမ်မှာနေပြီး လတ်ဆတ်တဲ့ အသီးအနှံလေးတွေနဲ့ အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းကြမယ်0514
The KaungHtet May 22, 2020 8:58 am January 12, 2022
လတ်ဆတ်တဲ့ အသီးအနှံလေးတွေက သင်တို့ရဲ့ အသားအရေကို များစွာအကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေပါတယ်။ ဓာတုဆေးဝါးလုံး၀ မပါဝင်ဘဲ အသီးအနှံလေးတွေနဲ့ Mask လေးတွေ ပြုလုပ်ခြင်းဟာ အသားအရေအတွက် လွန်စွာကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ အိမ်မှာနေတဲ့ သူလေးတွေအတွက် အပျင်းလည်းပြေပြီး အသားအရေကို လှစေမယ့် …
ကွန်ပျူတာတွေအကြောင်းသင်ဘယ်လောက်သိလဲဆိုတာ ဒီမေးခွန်းလေးတွေဖြေပြီးစမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်0513
The KaungHtet May 21, 2020 10:40 am May 21, 2020
သင့်ရဲ့ မော်တော်ယာဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်လိုက်ပါ0428
The KaungHtet May 19, 2020 10:55 am May 19, 2020
အွန်လိုင်းစီးပွားရေးများဟာ အနာဂတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Locl Down အခြေအနေများကြောင့်လည်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် Offline အခြေအနေမှ Online တွင်ရောင်းချခြင်းများသို့ အရှိန်မြင့်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ ရောင်းသူနှင့် ဝယ်သူနှစ် ဦး စလုံးသည် အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများ၏ အရေးပါမှုကို နားလည်သဘောပေါက်လာကြပြီး အကူးအပြောင်းလုပ်ရန်အတွက် စိတ်အားထက်သန်လာကြပါတယ်။ …